Android ဖုန်းအတွက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Kika ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်
အဆိုပါ Kika ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်ကဘာလဲ?
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုသင်တို့သည်ဤချစ်စရာ icon များမှတဆင့်အရာအားလုံးဖော်ပြစေရုပ်ပြောင်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးအမြိုးမြိုးပါဝင်သောအလွန်လူကြိုက်များ App ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် WhatsApp ကိုနှင့် Facebook ကီးဘုတ်တွင်ဤရုပ်ပြောင်ကိုသုံးပါပေမယ့် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုအတူသငျသညျယခုအဖြစ်ကောင်းစွာစာသားကိုဧရိယာ၌သူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါယူနီကုဒ် encoding ကမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤရုပ်ပြောင်ဆို input ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း keyboards နဲ့သူတို့ရဲ့ input ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပြင် Kika emos နှင့် GIF များများများပေးထားပါတယ်။ 800 ရုပ်ပြောင်ကျော်ကဲ့သို့အများအပြားမဆိုနှင့်သင်ထင်အားလုံးဖော်ပြရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ emos ရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုပုံ, မျက်မှောင်ကြုတ်ပြုံးရယ်, အော်ဟစ်တိုက်ဖျက်ရန်နှင့်ပိုပြီးနိုင်ပါတယ်။ ကဖြန့်ချိခဲ့အချိန်ကတည်းက app ကိုထိပ်ပိုင်းမှ၎င်း၏လမ်းကိုဖန်ဆင်းနှင့်အမေရိကန် Google မှာနံပါတ်တစ်ကီးဘုတ် app ကိုသန်း 130 ကျော် downloads, အတူ Store မှာ Play ကိုယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app နေ့တိုင်း 40 သစ်ကိုဒေါင်းလုဒ်နှင့်အတူလစဉ်လတိုင်းထက်ပိုမို 300,000 သန်းတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူဝါကြွားတတ်! အတူတူမိဘကုမ္ပဏီအားဖြင့်တချို့ကအခြားအက်ပ်အီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို, Kika Keyboard ကိုနှင့်အီမိုဂျီ Plus အားဖြစ်ကြသည်။
ဒီ app ကိုအပေါ်ရုပ်ပြောင်ပါးနဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသူတိုင်းခံစားချက်နှင့်အတူချက်ချင်းချိတ်ဆက်ကူညီပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သော app တစ်ခုမရှိရင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြအလားတူ-အလုံအလောက်ရုပ်ပြောင်နှင့်အတူပြုကြစေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ယခုနှင့်အတူ Kika ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်သငျသညျခဲကစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ သငျသညျဿုံသင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုထင်ဟပ်တကိုရှာဖွေအချို့ရှိပါသည်။ အဆိုပါရုပ်ပြောင်ဒါပေမယ့် GIF များမသာအဖြစ်ကောင်းစွာကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Kika ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်မသာအသုံးဝင်နှင့်ဖော်ပြဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းစံက Android ကီးဘုတ်မအရာအားလုံးကိုပါရှိသည်။ သင်ကမျိုးစုံရည်ရွယ်ချက်များအစေခံလုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင့်ရရှိနိုင်ပင် plugins ကိုရှိပါတယ်။ သင် app ကိုသင် app ကိုသူ့ဟာသူအတွင်းက browser တခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်သင်သိရသလား?
ကစွယ်စုံအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းသင်အသုံးပြုနိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သို့သော်အရာအားလုံးနှင့်ဝသကဲ့သို့ကြောင့်လည်းအတူပြဿနာများကို၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ သူတို့ကအသုံးပြုခဲ့သည့်အခါအချို့သောအသုံးပြုသူများ bug တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာအစဒုက္ခအချို့သော apps များအတွက်အလုပ်လုပ်ရှိပါတယ်။ မျှော်လင့်ဤမကြာမီလုံလောက်စွာ developer များအားဖြင့်ပုံသေရပါမည်။
Installing ကတက် setting
စိတ်ကြိုက်နေစဉ်က Android တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်ခဲ့သင့်ရဲ့ကီးဘုတ်ရှည်လျား, အခြားသူများရုံမကြာသေးမီကပြုလုပ်စတင်ခဲ့ကြလျက်ရှိသည်။ Kika ဖွငျ့ဤရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်အသုံးပြုသူများဒါအပေါ် themes များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်နိုင်စွမ်းပေးခြင်းအပြင်အင်္ဂါရပ်များ chock-ပြည့်ဝ၏။ ကတက်ချိန်ညှိခြင်းဟာကြီးမားတဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဦးစွာသင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် app ကို download လုပ်ပါ ကို Google ကနေ Store မှာ Play ထို့နောက်ပဲ့ထိန်း installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတဆင့်သွားပါ။ ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, သင်သည်သင်၏ကီးဘုတ်အတွက် themes များ၏ကြီးမားစုဆောင်းမှုမှတဆင့် browse နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကို pre-ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူမြားကိုမှရွေးချယ်သို့မဟုတ်ပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်!
သင်သည်သင်၏ default အတ cheery လှည့်ကွက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုပြီးပြည့်စုံအစားထိုး App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း emos နှင့် GIF များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။
Textra အီမိုဂျီ - ...
KKDiscovery - မြန်ဆန်ပြီးအသေးစား Browser